Mas’uul horay Xilal uga soo Qabtay DF Soomaliya oo Hargeisa yimid (Warbixin) | Kalshaale
Mas’uul horay Xilal uga soo Qabtay DF Soomaliya oo Hargeisa yimid (Warbixin)
Feb 13, 2018 - 16 Aragtiyood
Hargeisa (Kalshaale) Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa cafis u fidiyay Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya Maxamed C/llaahi Oomaar, kaasoo shalay dib ugu laabtay magaalada Hargeysa.
Maxamed C/llaahi Oomaar oo ka soo jeeda Somaliland ayaa labo jeer soo noqday Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Ra’iisul Wasaare kuxigeen dowladdii KMG aheyd ee uu hoggaaminayay Sheekh Shariif.
Qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa Hargeysa ayaa saaka qoray in Oomaar uu ka tanaasulay fikirkii uu hora u aaminsanaa, isla markaana uu garawsaday qadiyada gooni isu taagga ee Somaliland.
Waxaa lagu wadaa inuu la hadlo warbaahinta oo uu ka sheego mowqifkiisa iyo dib ugu soo laabashadiisa Hargeysa.
Siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland ee xilalka ka qabta dowladda Soomaaliya ayaa ka mamnuuca inay tagaan deegaanada Somaliland, iyagoo aan ka tanaasulin fikirkooda.
Madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Siilaanyo ayaa cafis u fidiyay siyaasiyiin dhowr ah sida Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Somaliland Ismaaciil Hurre Buubaa, Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka mid ahaa Musharaxiinta Madaweynaha ee isku soo sharaxay doorashadii sanadkii 2012.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (16)
Kkkkk. Waar warkan iska hubiya waayo 6dii Bishan ayaan ka soo baxay Hargaysa waxaana diyaaradda ila saarna ninkan ku dhashay Luuq. Malaha waxay ka hadlayaan nin kale.
Si kastaba jeegaantu way jaciidhsan tahay. Bal caqli xumadooda dhul Soomaaliyeed bay damcmeen inay xuduud beenaad ah u sameeyaan.
Markii ay ku fashilmeen riyadaasi beenta ah ayay ku habsadeen masaakiinta Somaaliyeed ee dalkooda isaga dhex gooshaya
Ali suber Waad iga qoslisay waa DAD ayago sojedo riyonayo kkkkkk
Waa Caadi in Siyaasiinta Irirku hadba mid tagaan 3da Caasimad ee Xorowdey 60kii.
Runtii markaan kaftanka ka saaro Mohamed Omar wuxuu ku jiraa ragga aaminsan meel kala tegimeyner aan saxno Qaladkii hore, si hoose iyo si Kulan guudba anagaa London ku su’aalney -Resolution of Somalia ( hadduu xaga tagey shacabka Hargeysa ayuu soo Tashkiilinhayaa ).
Nin shaqo ku maqan ku tiriya.
(Xamar Garxajis baa xirtey).
Naciimo Qoranaa yaabay.
Ishaad ka ridday laakiin waxaan kuu sheegahayaa in dhallintii reer woqooyiga ay maanta u qaxeen koonfurta iyo Muqdisho iyagoo ay Muqdisho u noqotay dhulkii malabka iyo fursadooyinka (land of honey and opportunity).
Dhedo roob noqon wayday
Luuq luuq marow laasim laamiga u dambayn doonaa……kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Hadiiba gabdhihii yar yaraa iyo fanaantii loo xaray tegitaankii xamar
Maxaa loo cafinayaa nin xamar kasoo noqday heer wasiir dibadeed?
Somaliya waa meel masaakiinta tabarta yar lagu gomaado
Xukun leysku dulmiya Somali ayaa aabe u ah
Xukun dadkiisa u daran somaliya ka baro
Ani DAWLADA DHEXE EE FEDERAALKA waxaan kula tallin lahaa dhamaan NIMANKA ISAAQ DAWLADA KU JIDHA dhamaantood in la wada eryo.
WAAYO, Shacabkii ISAAQ waxeey qaateen in ay SOOMAALI WEYN ka go’ayaan.
Bal eega, ninkaas MUDOOYIN BADAN ka soo shaqeeyey wasaarada arrimaha dibada, oo sir badan soo ogaaday, oo sir lagu soo dhiibi jiray oo maantay ku leh, ma aamisani SOOMAALI WEYN.
Ninkaase waxuu la mid yahay AXMED DUCAALEE, oo sirta u gudbin jidhay USA iyo ETHIOPIA markii laga duubay film isaga oo la wasaayo.
Marka, AXMED DUCAALE iyo Moxamed Cabdullahi OOMAAR waa isku mid.
SOOMAALIYA SOOMAALI BAA LEH. ILAAHOOW KUU NAXARIIS, JAALLEE MOXAMED SIYAAD BARRE.
MAXUU WADANIYADNIMO ka tegay.
(Xamar Garxajis baa xirtey}
Waa dhab hadalkaa
Labada hadbrood ee kale mar dhow arag haddii ayan imminkaba joogin iyagoo soo faaruqiyay jeegaanta iyo intay hargaysa, Gebiley iyo berbera ka degaan iwm.
Waxaa aan aad iyo aad u soo dhawaynayaa wadada hadalka uga furmay ONLF iyo dawlada Itoobiya.
ONLF Mudo ayaa dhib iyo huu haa Somaliweyn ay ku Jireen Laguna ku gooyay.
Maanta haday garteen inay dalkooda Itoobiya si nabad wax ula qaybsadaan Waxaan leeyahay Hambalyo.
Nabadaa leh naas la nuugo
KHANIIS IIDOOR WAGASHLEE, ka warran dhiladii 3 wacal kuu haaysay????
FUTO XAAR LEH uu la wareegayaa sidee ADEERKIIS AXMED DUCAALE, 1964 laga duubay filim isaga oo la wasaayo, se uu sirta DAWLADA u bixiyo oo waagaas uu u ahaa WASIIRKA DIBIDDA.
IIDOOR WAGASHLLEE, walee meharadooda kama gaboobaan.
Miyuu ku furay dhakh yahay makhnuudkii Australië kugu qabay.
Laga roone yahow!kkk
Nedel yahay nedel ku dhalay ee maadaa dheere, waxaad u darsatay sheebuugii Laalays ee kaalay qadhmuun yahow aan kuu cadeyee.kkkk
Hadaan halkaan soo dhigayaa sawiradaada adoo masaajid jooga qortayna inaad daboole tahay!
Naclatalaah calaa wajhak yaa munaafiq yaa awlaadal qawma luid.
Dhilada ku dhashay iyo walaaheedna diyaar u noqo inaan halkaa soo dhigo!
Fataal iyo fataalad baa iska kaa dhalay, waxay dhaleena khaniis. Kkk
Dhiladii 3 wacal kuu haaysay la’aad oohintaaa
Ina dhilo inaad tahay adaa isku cadeeyay ee meeshan soo dhigay in hooyadaa iyo walaashaa lagu hor kufsaday.
Makhnuud adaad isku cadeeyay iyadoo masaajid Sidney ku yaal ku qiratay inaad daboole tahay.
Habar yaraahaa dhilaynimada iyaagaa koob-ka kaalinta koowaad ka galay.
Nijaas nijaasadi dhalay baad tahay yaa ibnal funaafiq.